alatsinainy faha 30 desambra 2019 tokony tamin’ny 1 ora maraina teo amin’ny Akany Faly eny Ampasika rehefa avy nanendaka mpamily fiara-karetsaka miasa alina. Nisy fahasimbana ity fiara karetsaka ity ka ilay mody nanampy izy ireo ary niteny hoe hatosika ilay fiara. Rehefa voatosika tamin’ny toerana mangina dia noendahin’izy ireo ilay mpamily ka lasan’ireo olon-dratsy ny vola sy findain’ilay mpamily. Niantso vonjy ity farany ka sendra ny Polisy nanao fisafohana teny an- toerana indrindra ka raikitra ny fanenjehana ka voasambotra ireto olon-dratsy. Noentina teny amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana izy roa lahy ary tamin’ny famotorana natao no nahafantarana fa efa nigadra izy ireo ary izao tratra mameri-keloka izao indray. Marihana fa izy ireo no isan’ny mpitarika an’ireo jiolahy mpanao sitomahery sy mpanendaka eny amin’iny faritra FDC iny izay azahoana fitarainana matetika ary efa tadiavin’ny Polisy nandritra ny fotoana maro. Anio no atolotra ny fampanoavana izy ireo.